N'ogbe Inert na Polymer chaplet emeputa na Supplier | Dongli
Resins Nhazi matriks nke Polymer Ọdịdị Ụdị Ahụ Akụkụ urughuru Nnukwu ike ndọda Mbupu ibu Yiri ike Enwere ike iru
DL-1 Polypropylene Ọkpụkpụ Ọdịdị White 02.5-4.0mm 0.9-0.95 mg/ml 300-350 g/l 98% 3%
DL-2 Polypropylene Ọkpụkpụ Ọdịdị White Φ1.3 ± 0.1mmL1.4 ± 0.1mm 0.88-0.92 mg/ml 500-570 g/L 98% 3%
STR Polypropylene Ọkpụkpụ Ọdịdị White 0.7-0.9mm n'obosara 1.14-1.16 mg/ml 620-720 g/l 98% 3%
Ngwaahịa a enweghị ndị otu nọ n'ọrụ na enweghị ọrụ mgbanwe ion. A na -ejikọkarị njupụta ikwu n'etiti anion na resin cation iji kewapụ anion na resin cation wee zere mmetọ obe nke anion na resin cation n'oge ịmụgharị, iji mee ka mmụba zuru oke.
A na -ejikarị resin inert maka ọgwụgwọ mmiri nwere ọdịnaya nnu dị elu; Nnukwu mmiri na -eme ka ọ dị nro na ọgwụgwọ okwu; Neutralization nke n'efu acid na alkali; Ọgwụgwọ mmiri mkpofu electroplating nwere ọla kọpa na nickel; Enwekwara ike iji ya maka mgbake na ọgwụgwọ mmiri mmiri na -emebi emebi, nkewa na ịdị ọcha nke ọgwụ biochemical. Ọtụtụ ndị amaghị maka ọrụ na ojiji nke resin inert. Ka anyị leba anya n'ihe ndị a:
1. Ọ na -arụ ọrụ nke ikesa nkesa n'oge ọhụrụ.
2. Mgbe ọ na -arụ ọrụ, ọ nwere ike igbochi ezigbo resin ahụ iji zere igbochi oghere ụzọ ọpụpụ ma ọ bụ oghere nke okpu nzacha.
3. Gbanwee ọnụego ndochi resin. Ogo nke akwa na -ese n'elu mmiri metụtara ọnụego ndochi resin. Ọnụ ego ndochi dị obere ka ọ bụrụ akwa; Ọ bụrụ na ọnụego ndochi dị oke elu, resin ga -ejupụta mgbe mgbanwe na mgbasa gbasasịrị, bọọlụ ọcha nwere ike rụọ obere ọrụ na nhazi.
Nlezianya maka iji resin na -abaghị uru
Ụdị resin a na -akwụsi ike nke ukwuu n'okpuru ọnọdụ nchekwa yana ọnọdụ ojiji. Ọ naghị agbaze na mmiri, acid, alkali na ihe mgbaze anụ ahụ, ọ naghị anabata ha.
1. Ịrụ ọrụ, ibugo na ibutu ihe kwesịrị ịdị nwayọ, kwụsie ike ma na -adị mgbe niile, atụla aka. Ọ bụrụ na ala dị mmiri mmiri ma na -amị amị, gee ntị ka ị ghara ịmịcha.
2. Ọnọdụ nchekwa nke ihe a ekwesịghị ịdị elu karịa 90 ℃, yana ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ịdị 180 ℃.
3. Ọnọdụ nchekwa dị n'elu 0 ℃ na mmiri mmiri. Biko debe ngwugwu ahụ nke ọma ma ọ bụrụ na mfu mmiri n'oge nchekwa; Ọ bụrụ na akpọnwụ akpọnwụ, resin akọrọ kwesịrị ka etinye ya na ethanol ihe dị ka awa 2, were mmiri dị ọcha sachaa ya, wee debe ya ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọzọ.
4. Gbochie bọọlụ ịjụ oyi na ịgbawa n'oge oyi. Ọ bụrụ na achọtajuru oyi, jiri nwayọ gbazee n'ime ụlọ okpomọkụ.
5. N'ime usoro njem ma ọ bụ nchekwa, amachibidoro ya ike idobe isi na -esi ísì, ihe na -egbu egbu na ihe na -egbu egbu siri ike.
Nke gara aga: Ngwakọta resin agwakọta
Osote: Ihe mgbakwunye Adsorptive Macroporous